Home News Yariisoow oo yaaban iyo Jahwareer ka taagan Gobolka Banaadir!!!
Yariisoow oo yaaban iyo Jahwareer ka taagan Gobolka Banaadir!!!
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho oo Xafiiska shaqada jooga muddo ku siman Shan bilood ayaa wajahaayo culees Siyaasaded.
Gudoomiye Yariisow wuxuu sheegay inuu ka shaqeyn la’yahay Xildhibaano ka tirsan dowladda.
Inkastoo Masuuliyiinta Gobolka Banaadir ay ku jiraan Xubno ka tirsan Madaxtooyadda iyo Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Somaliya, kuwaasi oo aad ula socda dhaqdhaqaaqa Duqa Magaalada Muqdisho, ayaa haddana la ogeyn sida Yariisow saaxiibada gaarka ah ay ku sii ahaan doonaan Xubnaha Mucaaradka ka tirsan ee xafiiskiisa aanan ka bixin.
Si kastaba ha ahaatee, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir hadda soo wajahday cabsi ah in xilka laga qaado,maadama uu sii xoogeystay khilaafka iyo muranka kala dhaxeeyo Siyaasiyiin ku dhow madaxtooyada Soomaaliya.